Dawlada Ethopia oo ku Dhawaaqday Saddex Cisho Oo Baroor Diiq Ah. |
Dawlada Ethopia oo ku Dhawaaqday Saddex Cisho Oo Baroor Diiq Ah.
Baarlamaanka Itoobiya ayaa Shalay ku baaqay in wadanka laga sameeyo 3 maalmood oo baroor-diiq ah ka dib markii ugu yaraan 82 qof ku dhinteen qashin-qubka Addis Ababa. Baarlamaanka ayaa intaa ku diray inay tacsi u dirayaan ehelkii laga geeriyooday islamarkaana hoos loo dhigayo calanka qaranka.
Qashin aad loo tuulay oo buuro noqday ayaa ku soo dumay dad lagu qiyaasay 150 oo xiligaas ku sugna goobta qashinka iyo guryihii ku dhawaa oo hadda aasan.
Warbaahinta mucaaradka ayaa dawlada ku dhaleecaysay inay dayacday dadkii deggana goobtaas iyada oo la filaye in mashaqo noocan ah dhici karto xilli kasta. Waxaa jira xogo tilmaamaya in qashanku hadda ka hor soo dumay islamarkaana dad laayey inkastoo khasaaruhu aad u yaraa.
Docda kale, dad gadoodsan ayaa maanta galinkii hore hor istaagay hawlahii gurmadaka. Dadka qamaamay oo ah qarabadii daka dhintay iyo kuwo la la’ayahay ayaa sheegay inay gacmahooda ku baadi-goobayaan dadka aasan oo aan la filaynin in nolol lagu soo saaro.
Qaraabada dadka geeriyooday ayaa ka cabanaya gagaar la’aan iyaga oo dawlada ku eedye inaan waxba loo qaban. Mid ka mid ah dadka cadahaysan yaa yidhi kooxha gurmadka samaynaya, “Ku noqda meeshad ka timaadeen. Waxaad iska dhigaysan inaad wax nooqabanaysan”.
Dawlada oo ka cabsi qabta in xaaladu isu rogto mudahaarad ayaa ciidan badan soo dhoobtay. Xaalada ayaa la sheegay inay galnkii danbe daganayd inkastoo dad badan weli hereero tuman yihiin meesha mashaqadu ka dhacday.
Duqa Addis Ababa, Driba Kuma, ayaa sheegay in dib u dajin loo samayn doono dadkii masiibadu ku dhacday. Duqa ayaa sheegay in 106 qoys oo dib loo dajiye meelo kale.
Caasimada Itoobiya oo hoy u ah dad ku dhaw 4 milyan ayaa maarayn kari la’ qashinka. Goobta hadda duntay ayaa hadda ka hor laga joojiye qashinka, balse dib ayaa loogu soo noqday ka dib markii beeroleyda Oromadu diiday in beerahooda laga dhigo meel cusub oo qashinka lagu qubo.
Tirada dhimashada ayaa lagu wadaa inay kor u kacdo maalmaha soo socda.